Mareykanka oo Qoor-Qoor u aqoonsaday madaxweynaha Galmudug – Hornafrik Media Network
Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa barteeda Twitter-ka kusoo qortay in geedi socodka siyaasadeed ee Galmudug uu yahay bilowga geedi socodka dib u heshiisiin Sal ballaaaran.
”Geedi socodka siyaasadeed ee Galmudug waa bilowga geedi socodka dib u heshiisiin sal ballaaran. Amb Yamamoto wuxuu ugu baaqayaa qof walba inuu ku biiro wada hadal nabadeed isla markaasna laga fogaado qalalaasaha” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Amb Yamamoto uu halmabalyo u dirayo Madaxweynaha cusub ee Galmudug loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, taasoo muujineyso inuu Mareykanka aqoonsaday doorashadii maanta ka dhacday Dhuusamareeb.
Axmed Qoor-Qoor ayaa wareegii koowaad ku soo baxday Doorasho goor dhaw ka dhacday magaalada Dhuusamareeb, waxuuna helay 66 cod oo ka mid codadka 77 xildhibaan oo kulankii maanta soo xaadirtay.